Radio Dhangadhi 90.5 MHz | दीपिकाले किन दिइनन् अनुष्कालाई बिहेको बधाई ?
Friday, October 18 2019, 20:07 | शुक्रबार ०१, कार्तिक २०७६ २०:०७
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४| Radio Dhangadhi
भारतीय क्रिकेटर बिराट कोहली र बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माबीचको बिहे भारतमा ठूलै समाचारको विषय बनिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुले बधाई खाएको खाएै छन् ।
राजनीतिज्ञ, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले यो जोडीलाई बधाई र शुभकामना दिएका छन् । तर, बलिउडका एक जोडी भने यो मामलामा मौन रहे । उनीहरुले बधाईमा एक शब्द पनि खर्चिन चाहेनन् । उनीहरु हुन् नायिका दीपिका पादुकोण र उनका व्वाइफ्रेन्ड रणवीर कपुर । रणवीरले विवाहको एउटा फोटोमा लाइकसम्म गरेका थिए ।
यो जोडीले बिराट-अनुष्कालाई शुभकामना नदिनुको कारण छर्लङ्गै छ । खासमा रणवीर र अनुष्काबीच पहिले प्रेम थियो । त्यो प्रेम टुटेपछि रणवीरले दीपिकालाई टिपे भने अनुष्काले टिपिन् बिराटलाई । पुरानो सम्वन्धको धङधङी दुवैमा अझै बाँकी नै रहेको हुनुपर्छ ।
अहिले दीपिकाले पनि आफ्नो व्वाइफ्रेन्डको एक्सलाई के बिबाहको बधाई दिइरहन्थिन् । यस विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा भने उनले आफूले दुवैलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएर बधाई दिएको दावी गरेकी छिन् । तर, उनको दावीलाई कसले पत्याउने ?
शुक्रबार २९, मङि्सर २०७४ ०६:३५ मा प्रकाशित ।